यसकारण स्वस्थ रहन खानामा ख्याल गरौँ
काठमाडौं - खानपान नमिल्दा दैनिक जीवनमा हामी विभिन्न रोग तथा संक्रमणको सिकार भइरहेका छौँ । के–कस्ता खाद्यपदार्थको उपभोग गर्ने, कति मात्रामा गर्ने, स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक खानेकुरा के–के हुन् भन्ने कुरामा धेरै अनभिज्ञ छन् । जानकारी भए तापनि कति मानिस ...
आलुको बोक्राको यी फाइदाहरु यस्ता छन्
काठमाडौं - प्रायस्को भान्सामा आलु पाक्छ । केही मानिसहरुले आलुको बोक्रा फाल्छन् भने केहीले फाल्दैनन् । आलुको बोक्रा फाल्दा प्राकृतिक स्वादमा समेत कमी आउने गर्छ । तर, आज हामी तपाईलाई प्रायस्ले फाल्ने आलुको बोक्राको फाइदाबारे जानकारी दिनेछौं ।आलुको बोक् ...
स्वस्थ्य हुन के खाने के नखाने ? एकपटक अवश्य जान्नुहोस्
काठमाडौं - स्वस्थ रहन हाम्रो शरीरलाई ४० भन्दा बढी पोषक तत्वको आवश्यकता पर्छ र कुनै एकल भोजनले ती सबै तत्व परिपूर्ति गर्न सक्दैन । त्यसैले सन्तुलित रूपमा विभिन्न प्रकारका पोषणयुक्त खानाको सेवन गर्नुपर्छ । त्यसैले भोजनमा विविधता ल्याउन जरुरी हुन्छ ।कार ...
मंगलवार देखि सोह्र श्राद्ध शुरू हुँदै
काठमाडौं — मंगलवारदेखि पितृपक्ष अर्थात सोह्र श्राद्ध शुरु हुदैछ । यसबेलामा केही काम अवश्य गर्नुपर्छ र केही काम पटक्कै गर्नु हुँदैन । यी कुरामा ध्यान दिनुस् ।श्राद्ध आफ्नै घरमा गर्नुपर्छ, अर्काको घरमा गर्न निषेध छ ।श्राद्धमा तीन वस्तु पवित्र मानिन्छ स ...
आँँखा वरिपरि ‘डार्क सर्कल’ हटाउन यसो गर्नुहोस्
काठमाडौं - बढी काम गर्ने, तनाव लिने, पर्याप्त नसुत्नेलगायत कारणले आँखावरिपरि ‘डार्क सर्कल’ देखापर्ने गर्छ । यसले मानिसको समग्र सुन्दरतामै ह्रास ल्याउँछ । डार्क सर्कल हटाउन यी भिटामिन पाइने खानेकुरा खानुपर्छःभिटामिन एभिटामिन एयुक्त खाना खाँदा छाल ...
खाना खाइरहेको बेलामा पानी पिउने कि नपिउने ? एकपटक अवश्य जान्नुहोस्
काठमाडौं — खाना खाइरहेको बेलामा पानी पिउँदा स्वास्थ्यमा हानि पुग्छ भनिरहेका हुन्छन् धेरैजना । खानासँगै पानी पिउँदा शरीरमा टक्सिनहरू जम्मा हुने र त्यसले अनेकौं रोग निम्त्याउने उनीहरू बताउँछन् । तर विभिन्न स्वास्थ्यविज्ञहरूको भनाइ बेग्लै छ । ...